Bambalwa abantu bobulili fair kungaba ozibongayo hair obukhulu, amahle ephelele, unikezwa ngokwemvelo. Iningi ezinjalo kuphela baphupha, futhi kuyinto nje iphupho, ngaphandle kokwenza noma yimuphi umzamo. Sebenzisa ezinhle, imoto ezibizayo, wenze buso nokuya nokucwala ngokwanele, kungcono ukondla izinwele namanje ngaphakathi. Futhi ukuze asize nale kungaba amavithamini ezinhle izinwele. izakhi namaminerali izinwele zakho kanye isikhumba, izinzipho nakho konke okunye, uthole ngaphakathi emzimbeni. Nazi amavithamini izinwele ukukhula kudingeka, ake uthole ndawonye.
Ake uqale nge imikhiqizo ahlinzekwa yi ekhemisi inethiwekhi yethu. Njengoba baziwa izidakamizwa ezifana "Perfectil", "Nutrikap", "Merz Beauty", "Inna izinwele ukuminyana" nezinye izidakamizwa eziningi. Uma isibalo ongakhetha akade ngenhla - kungcono amavithamini kuhle izinwele, elakhelwe, i- "Nutrikap" - evamile amaminerali eziyinkimbinkimbi ukuthi bangathola nokudla kushintshwe. Akekho uveza ukuthi azanele, kodwa uzobona umphumela ngezinyanga ezingaba yisithupha. Uma ufuna ukusebenza ngokushesha, bese sibheka yakho ekuthuthukiseni izinkampani okuholela kule nsimu - ". Merz Nobuhle" «Vishy», «Ladys Formula» noma okufanayo Kuvela elinye iqiniso elithakazelisayo kakhulu: kakhulu amavithamini ezinhle ngoba izinwele - kuyinto eziyinkimbinkimbi amavithamini, okuhloswe kwabesifazane abakhulelwe. Lapha kukhona bonke amaminerali ezidingekayo futhi izinto eziphilayo lapho babe nomthelela omkhulu hhayi kuphela kwi izinwele, kodwa futhi ku wonke umzimba.
Ngakusasa ingxenye ebaluleke kakhulu - i-calcium. Ubisi, ushizi, cottage shizi, ubhontshisi kanye iklabishi - yileyo mthombo ongashi yezipikili eqinile futhi izinwele enempilo. Kuyaphawuleka ukuthi abantu ngokuvamile kudla imali enkulu ikhofi noma ukubhema, i-calcium akuyona amuncwa wumzimba yaphelela, ngakho-ke kungcono ukuqala nokuqedwa yokutakula imikhuba emibi. Ngakho, liye ohlwini labo izakhiwo ukuthi kakade olinganiselayo ngokugcwele futhi babe orientation ewumngcingo ezikhethekile. Futhi manje ake sibone, ukuthi ziyini amavithamini ezidingekayo kakhulu izinwele. Into ebaluleke kakhulu - uvithamini A, noma retinol. Libuyela izinwele akhanye ephapheme futhi ukujiya. A gcwalisa ukulinganisela kwakhe emzimbeni Kulula kakhulu! Vele ukudla nsuku zonke ibhulakufesi isaladi wobusha nobuhle - a izaqathe shabby ogayiwe ne izithelo ezomisiwe namafutha omnqumo.
Vitamin E kuvimbela brittleness futhi izinwele-sigaba. Okuhle okuqukethwe it is ebonwe ezitshalo. Magnesium ngcono inqubo ukudla izinwele nokubuyiselwa, okuqukethwe gcwalisa emzimbeni kungaba, ubhanana ukudla, ubisi, soy, ukolo noma amazambane. Zinc ivikela izinwele kusukela ukungaboni ngaso linye. Ziphathe izinhlanzi zasolwandle noma amantongomane, wena ubuyise izinqolobane of selenium emizimbeni yabo, okuyinto ngokunenzuzo kuthinte umzimba bese ugcine izinwele zakho nezinzipho eziqinile, ukuvimbela brittleness nesigaba.
Njengoba ubona, amavithamini kuhle izinwele ezitholakala okudla esikudlayo cishe nsuku zonke ukuze adle. Ngakho-ke Lungisa ekudleni kwakho, give up imikhuba emibi - futhi umzimba wakho uzokutshela "ngiyabonga"!
I-Palette Estel - ikhwalithi yobuchwepheshe